Hageyesa: Guddiga wadahadalka u qaabilsan Somaliland iyo Xisbiyada oo shiray – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Hageyesa: Guddiga wadahadalka u qaabilsan Somaliland iyo Xisbiyada oo shiray
24th February 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Guddida Wada hadalada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Somaliland u qaabilsan maamulka uu hogaamiyo madaxweyne Siinaalyo ayaa maanta kulan la yeeshay saddexda xisbi ee halkaas ka jira, loona ogolyahay iney u tartamaan xilka madaxweynaha.
Kulanka dhexmaray Guddiga Somaliland uga qeybgelaya waxa hadalka iyo madaxda xisbiyada saddexda ah ayaa la sheegay inuu ku saabsanaa sidii la iskaga xaal ogaan lahaa arrimaha wada hadalada iyo waxa guddidu ka qabto.
Wasiirka arrimaha debadda maamulka Somaliland, Maxamed Biixi Yoonis, ayaa saxaafadda u sheegay inay Xisbiyada u casuumeen sidii ay afkaartooda iyo talooyinka ay hayaan uga qaadan lahaayeen islamarkaana iskula eegi lahaayeen Qorshaha Guddida.
Waxa uu sheegay in Axsaabta qaar soo jeediyeen in la hakiyo wada hadalka inta ka hadhay doorashada “Maadaama doorashooyinkii soo dhaw yihiin Xisbi ayaa ku taliyay in la yara hakiyo laakiin, saddexda Xisbi qaran ba waxay isla waafaqsan yihiin in wada hadalku danta Somaliland yahay laakiin, waxay soo jeediyeen in la hakiyo inta doorashadu dhacayso” ayuu yiri Maxamed Biixo Yoonis.
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha dibadda Somaliland, ayaa tilmaamay inaan wada hadalada Somaliland iyo Somalia iyo qabsoomida doorashada wax xiriir ahi ka dhexayn islamarkaana cidda kursiga fadhidaa wadayso wada xaajoodka labada dhinac.
“Waxaan qabnaa inaan doorashada iyo wada hadallada Somaliland iyo Somalia laba wax oo isku shaqo leh ahayn. Amma xukumaddan ha ahaato amma kuwa ka dambeeya ha ahaatee wada hadalladu way soconayaan, kolbana ciddii Kursiga ku fadhida ayaa hawlahaas ka qayb galaysa” ayuu yiri Maxamed Biixi.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata waxa uu intaasi raaciyay “Doorashada Komishan baa jira, Hay’addaas baa loo xilsaaray, hawshoodii way socotaa, markaa Shaqo ay labadu isku leeyihiin ma jirto, haddii xataa doorashadu bari dhacayso oo Wada hadalku saadambe yahay waanu tagaynaa, markaas laba wax oo isku shaqo leh maaha ee waa Kaaf iyo Kala dheeri labadaasi, markaas nooma muuqato wax loo hakiyaa waayo?”
Axsaabta Mucaaradka ah ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku doodayay in Xukumaddu isku duubtay wada hadalada oo arrin qaran ah, sida warka loo dhigay, islamarkaana Mucaaradku aanu door ku lahayn, sidaasi darteedna ay haboon tahay in la joojiyo wada xaajoodka.
Cabdinaasir Qodax, Xoghayaha Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID, ayaa sheegay inay guddida la socodsiiyeen inaan Turkigu dhex ka ahayn wada hadalka islamarkaana la safan yahay Somalia, kana so horjeedo gooni isku taaga Somaliland, sidaas darteedna ay haboon tahay in wada hadalka lagu celiyo dariiqii uu ku bilaamay ee wadamada Ingiriiska iyo kuwa kale ee arrintan dhexdhexaadka ka noqon karaa dhexdhexaadiyaan, sida uu hadalka u dhigay.
Sida horay loo qorsheeyey 27-ka bishaan Febaraayo ayaa la filayaa in wareeg kale oo wadahadal uu dowladda Soomaaliya iyo maamulka Somaliland ku dhexmaro magaalada Istanbul ee daka Turkiga.
Sanadguuradii 45-aad ee ciidamada Asluubta Soomaaliya oo la xusay (Sawirro)
Kenya oo maxkamad soo taagtay 100 Itoobiyaan nolol raadis ah oo ku socday Koonfur Afrika